यि सच्चा प्रेमी जसले वाचा कबुल अनुसार प्रेमिकालाई चन्द्रमामा जग्गा किनिदिए, प्रेमिकाले खुशी हुँदै भनिन् तिमीलाई जतिबेला मन लाग्छ माग म दिन्छुनी – Gazabkonews
यि सच्चा प्रेमी जसले वाचा कबुल अनुसार प्रेमिकालाई चन्द्रमामा जग्गा किनिदिए, प्रेमिकाले खुशी हुँदै भनिन् तिमीलाई जतिबेला मन लाग्छ माग म दिन्छुनी
काठमाडौं । मान्छेहरुले कुरा गर्दा आफ्नी प्रेमीकालाई तारा टिपेर ल्याउने वाचा गर्छन् । जुनको ज्योति ल्याएर दिन्छु पनि भन्न सक्दिन म सागरको मोति ल्याएर दिन्छु पनि भन्न सक्दिन म म त सत्य कुरा गर्छु भन तिम्रा लागि मर्छु हो..हो..हो म त तिमी बिना पागलै हुन्छु भन्ने चलचित्रको गीत निकै चर्चित भएको थियो ।
तर यो बीचमा एक व्यक्तिले श्रीमतीका लागि चन्द्रमामा जग्गा खरीद गरेको खुलेको छ । हरेकको एक दिन चन्द्रमामा जमिन किन्ने सपना देख्छन् । तर यो सपना राजस्थानको अजमेर निवासी सपना अनिजाले पूरा गरेकी छिन् । अजमेर निवासी धर्मेन्द्र अनिजाले बिहेको वार्षिकोत्सवमा चन्द्रमामा तीन एकड जग्गा उपहार दिएका हुन् ।
एएनआईसँग कुराकानी गर्दै धर्मेन्द्रले ८औं विवाह समारोहमा उनी आफ्नी श्रीमतीको लागि केहि विशेष गर्न चाहेको बताएका छन् । केही फरक गर्ने बहानामा उनले चन्द्रमामा जग्गा किनेका हुन् । उनले भने, ‘२४ डिसेम्बर हाम्रो विवाहको वर्षगाँठ थियो । म मेरी श्रीमतीको लागि केहि विशेष गर्न चाहन्थें । धेरै व्यक्तिहरु कार उपहार दिन्छन् वा गहना दिन्छन् ।
तर म केहि फरक गर्न चाहान्थे । त्यसैले मैले चन्द्रमामा जमिन किनें ।’ धर्मेन्द्रले संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यु योर्क शहरमा रहेको फर्म, लुना सोसाइटी इन्टरनेसनलबाट चन्द्रमाको जग्गा किनेका हुन् । उनले बताए कि खरीदको सम्पूर्ण प्रक्रियामा एक बर्ष लाग्यो । उनले भने, ‘म धेरै खुसी छु । मलाई लाग्छ म राजस्थानको पहिलो व्यक्ति हुँ जसले चन्द्रमामा जमिन किने ।’
धर्मेन्द्रकी श्रीमती सपनाले आफुलाई पतिले यति ठूलो र अनौंठो उपहार दिन्छन् भन्ने आशा लागेको थिएन् । सपनाले भनिन्, ‘म धेरै खुसी छु। मैले आशा गरेकी थिइन् कि उनले त्यस्तो विशेष उपहार दिन्छन् । त्यहाँ एउटा पार्टी थियो जहाँ यस्तो लाग्थ्यो कि हामी वास्तवमा चन्द्रमामा छौं। पतिले एउटा फ्रेम दिए, जसमा सम्पत्ति कागजातहरू थिए ।’
केही महिना अघि, बिहारका एक व्यक्तिले आफ्नो जन्मदिनमा चन्द्रमा एक एकड जमिन लियो । बलिउड अभिनेताबाट प्रेरित भएर उनले यो कदम चालेका थिए । बलिउड बादशाह शाहरुख खान र स्वर्गीय अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको पनि चन्द्रमामा जग्गा छ ।
पार्टी फु*टेको अवस्थामा पुग्दा प्रतिगामी शक्तिले सडकमा उत्सव मनाए भन्दै रोए बादल
काठमाडौं । गृहमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले नेकपा विभाजनबाट प्रतिगामी श,क्तिहरू उत्साहित भएको बताउनुभएको छ । शनिबार कमलादीमा बृहत कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेकपाबाट एउटा गुट अलग हुँदा प्रतिगमनकारीहरूले सडकमा उत्सव मनाएको बताउनुभयो ।
नेता थापाले राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्न सकेको र दुई तिहाइको सरकार विघटन गर्न पाउँदा प्रतिगमनकारी खुसी भएको टिप्पणी गर्नुभयाे । ‘उनीहरु फेरि प्रतिगमन फर्काउन सकिन्छ र पूरानै व्यवस्था फर्काउन सकिन्छ भनेर सडकमा उत्साह मनाइरहेका छन्’, उहाँले भन्नुभयो । देशी विदेशी शक्तिहरू प्रतिगमन भित्र्याउन क्रियाशिल भएको उहाँको आरोप छ ।
फरक प्रसङ्गमा नेता थापाले पार्टी राजनीतिक र विचारधाराका कारण विभाजित नभएको बताउनुभयो । अशंबण्डाको झगडाका कारण पार्टी विभाजन भएको बताउँदै उहाँले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, राजदूत, मन्त्री लगायतका पदमा भागवण्डा नमिलेपछि दाहाल–नेपाल पक्ष पार्टी विभाजनको दिशामा अघि बढेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
कम्तीमा दुई अंकको सिट जितेर देखाउन केपी ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई दिए ठाडै चुनौती
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा कम्तीमा दुई अंकको सिट जित्न दाहाल–नेपाल पक्षलाई चुनौती दिनुभएको छ ।
शनिबार ओलीपक्षीय नेकपाको काठमाडौं जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको वृहत कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोनध गर्दै उहाँले दुई अंकको सिट जितेर देखाउन चुनौती दिनुभएको हो । ‘कमसेकम दुईटा अंकसम्मको सिट ल्याएर देखाउनुस्, दुईटा अंक’, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल–नेपाल पक्ष पुनः पार्टीमा फर्कने दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले अब फर्किएपछि उपद्रो मच्चाउन नदिने बताउनुभयो । साथै उहाँले फर्किएकाहरूलाई केन्द्रीय कमिटीभन्दा माथिल्लो तहमा नराखिने बताउनुभएको छ । ‘अब उहाँहरूलाई थन्कोमा राखिन्छ ।’
जंगलबाट राजमार्ग छिचोल्दै गरेको पाटेबाघलाई अजयको कारले दियो ठ;क्कर, छट;पटाउँदै बाघ सडकमा नै ढ;ल्यो, भाग्दै गरेका अजय समातिए
कारको ठक्करबाट पूर्वपश्चिम राजमार्गकोझ बारा-जितपुर खण्डमा पाटेबाघको मृ,त्यु भएको छ।
जंगलबाट राजमार्ग छिचोल्दै गरेको पाटेबाघलाई बा१६ च ८११ नम्बरको कारले बिहान सवा ७ बजे ठ,क्कर दिएको हो।
बाराका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण पंगेनीका अनुसार जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ आधारभार जंगलमा कारले बाघलाई ठ,क्कर दिएको हो।
कार हेटौंडाबाट सर्लाही जाँदै थियो। ठक्करबाट बाघको घटनास्थलमै मृ,त्यु भएको छ।
कार चालक सर्लाहीका अजय मिश्र र बाघलाई प्रहरीले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको जिम्मा लगाएको पंगेनीले बताए।
भारतका हरेक मान्छेलाई मेरो नाम थाहा छ भन्दै ठूला कुरा गरे केपी ओलीले, कहिलेसम्म यसरी हावामा उडिरहहन्छन् ओली ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतका हरेक नागरिकलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीको नाम थाहा भएको बताउनुभएको छ ।
शनिबार नेकपाको काठमाडौं जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको वृहत कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि विश्वभर नेपालको चर्चा भएको बताउनुभयो ।
‘यसअघि नेपालको बारेमा कहाँ चर्चा हुन्थ्यो रु, नेपालको प्रधानमन्त्रीको नाम सोध्दा कसैलाई थाहा थिएन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘अहिले भारतका हरेक मानिसलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीको नाम थाहा छ ।’
आफू प्रधानमन्त्री भएपछि चीन र भारतका साथै अन्य तेश्रो मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध सुमधुर भएको उहाँको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पालामा भएको विकास निर्माण र समृद्धिको विषयलाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले समेत देखेको अवस्थामा माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालले नदेखेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
रमेश प्रसाईकी पत्निको आँखाको शल्यक्रिया हुँदै, आर्शिवाद दिनुहोस् रमेश र नन्दालाई
कालिकोट स्थायी घर भएकी नन्दा सिंह आफैमा एक दृष्टिबिहिन हुन । भर्खरै मात्र चर्चीत वक्ता रमेश प्रसाइ संग विवाह बन्धनमा बाँधिएर अझ बढी चर्चा कमाउन सफल नन्दा संह, २ वर्षको उमेर हुँदासम्म आँखा देख्थिन । तर जब उनलाई दुई बर्षको उमेरमा झाडापखलाले नराम्ररी समात्यो तब उनी धेरै लामो समय सम्म बिरामी भइन । त्यसपछि नन्दालाई निको नभएपछि घर गाउँ सबैले अब यो म”री भनेर सेतो कपडामा बेरेर नजिकैको जङ्गलमा लगेर गाड्न ठिक्क पारेका थिए।
हो त्यतिनै बेला संयोग पनि कस्तो भैदियो, त्यतिनै बेला राति चलमलाएर नन्दा ब्युँझिन । त्यसपछि यो यो त ज्यूँदै रहिछ भनेर सबैलाई बाँ”चेको थाहा भयो। तर बाँ”चे पनि जीवनमा अन्धकार थपियो। झाडापखला लाग्नुअघि आँखा देख्ने उनि त्यसपछि भने नदेख्ने भइन्, बाल्यकाल पनि अन्धकारमै बित्यो।
“बाल्यकालमा अरु साथी खेलेको देख्दा मलाई पनि खेल्न मन लाग्थ्यो। अरु साथीसँग मलाई खेल्नसमेत दिइँदैनथ्यो किनकी मेरो जस्तै आँखा नदेख्ने रोग अरु केटाकेटीलाई पनि सर्छ भन्थे । मन भित्रभित्रै रुन्”थ्यो, बाल्यकालमा आँखा न”देख्ने अ”न्धी भनेर हे”प्थे ।” नन्दाले भावुक भएर सुनाइन् । तर मेरो मनमा एउटा आँ”ट पलायो, जीवनमा केही न केही गर्छु भनेर मनलाई द”ह्रो बनाए। नन्दाले बताइन् । त्यसपछि नन्दा आफ्नी मिल्ने साथी संग काठमाडौ आइन र काठमाडौंमा बाल(आश्रम चलाइन र अहिले पनि चलाइरहेकी छिन् ।
उनले आफ्नो बाल्यकाल देखिकै मिल्ने साथी गिता बस्नेत संग मिलेर अन्तरदृष्टि नेपाल’ नामक अना”थालय सञ्चालन गरे । आफैमा दृष्टिबिहिन, आफुलाई नै अरुको साहारा चाहिने हुदाहुदै पनि संस्थामा करिब एक दर्जन बालबालिकाहरुलाई आश्रय दिदै आएकी छिन् ।
भर्खरै मात्र विवाह बन्धनमा बाँधिएर नन्दा अहिले फेरि काठमाडौ आइपुगेकी छिन । उनी काठमाडौ आइसकेपछी एक युटुब च्यानलमा एउटा कुराको खुलासा गरेकी छिन । तपाइँको आँखाको उपचारको लागि के सोच्नुभएको छ भन्ने प्रश्नमा नन्दा भन्छिन स्( मेरो आँखा बन्छ कि बन्दैन थाहा छैन तर पनि अब म केही दिनमै वरिष्ठ डा। सन्दुक रुइत संग परामर्श लिन उहाँलाइ भेट्न जाँदै छु ।
नेपालमा नभएर विदेश मा हुने भयो भने पनि म जान सक्दिन किनकी मेरो त्यँहा सम्म जाने हैसियत छिन । भरिसक नेपालमै भैदिएको भए सहज हुन्थ्योस म भन्दा पनि मेरा यी बालबच्चा लाई हुर्काउन अझ बढी सहज हुन्थ्यो भन्ने उनको उनको भनाई थियो । अब हेर्नुस् अन्य अरु के के भनिन त आफ्नो आँखाको उपचारको बारेमा । भिडियो हेर्न तल लिंकमा क्लिक गर्नुहोला ।
हालै विबाह बन्धनमा बाँधिएकी नायिका श्वेता खड्काका पति विजयेन्द्रको आज जन्मदिन, पतिको जन्मदिनमा यस्तो मिठो स्टाटस लेखेर शुभकामना दिइन् श्वेताले
काठमाडौँ । गत महिना काठमाडौँको गोकर्ण रिर्सोटमा धुमधामले विबाह गरेकी नायिका श्वेता खड्काका पति विजयेन्द्र सिंह रावतको आज जन्मदिन परेको छ । जन्मदिनको अवसरमा श्वेताले आफ्ना पतिलाई भिन्न तरिकाले शुभकमना ब्यक्त गर्दै खुशी आफ्ना दर्शकमाझ साटेकी छिन् ।
श्जेताले गएराती नै पोष्ट गरेको स्टटास यो समाचार तयार पार्दासम्म करिब २६ हजारले लाइक गरिसकेका छन् भने ३ हजार कमेन्ट आएका छन् । जसमा उनलाई पतिको दिर्घायूको कामना गरेका छन् । नयाँ जीवन सुरु गरेकी श्वेताका पतिलाई हाम्रो पनि जन्मदिनको शुभकामना ।
कामदार मालिक बनेपछि ….
चितवन – दुई दशक अघि अर्काको पुस्तक पसलमा सहयोगी भएर काम थाल्नुभएका एक युवक अहिले पुस्तक पसल मात्रै होइन, पब्लिकेशनको मालिक बन्नुभएको छ । उहाँकै क्रियाशीलतामा जिल्लाका लेखकले पुस्तक लेख्ने र छपाउने गर्न थालेका छन् ।
गैँडाकोट नगरपालिका–७ गैह्रीका लेखराम सापकोटाले विसं २०५७ मा एसएलसी परीक्षा दिएसँगै पुस्तक पसलमा काम गर्न थाल्नुभयो । नारायणगढको मिलनरोडमा रहेको पाण्डे पुस्तक पसलमा सहयोगीका रुपमा सापकोटाले दुई वर्ष काम गर्नुभयो । त्यसपछि उहाँका दुई वर्ष काठमाडौँको एशिया पब्लिकेशनमा बित्यो । यसपछिका छ वर्ष मलेसिया, कतार र संयुक्त अरब इमिरेटस्मा बिताउनुभएका सापकोटा फेरि फर्किएर यहाँकै मास्के पुस्तक भण्डारमा काम थाल्नुभयो ।
चार वर्ष त्यहाँको अनुभवपछि विसं २०७१ भदौमा सापकोटाले साथीसँग मिलेर पुस्तक पसल खोल्ने निर्णयमा पुग्नुभयो । सुनगाभा पुस्तक पसल उहाँको साझेदारी पुस्तक पसल थियो । त्यसको थप अनुभव लिँदै जाँदा अहिले उहाँले एकल स्वामित्वको सम्पूर्ण किताब पसल खोल्नुभएको छ । साथीसँग मिलेर थोक व्यापारका लागि काठमाडौँको भोटाहिटीमा सम्पूर्ण किताब पसल पनि छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “भोटाहिटीको हामी दुई जनाको साझेदारीमा खुलेको पसल हो । यो मेरो निजी हो ।” यससँगै युरेका पब्लिकेशनको उहाँ एकजना साझेदार हो जसले हालसम्म ३० वटा पुस्तक प्रकाशन गरिसकेको छ । युरेकाको प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहनुभएका सापकोटाको व्यावसायिक सम्बन्ध साङ्ग्रिला पब्लिकेशनसँग पनि छ ।
सम्पूर्ण किताब भन्नासाथै जिल्लामा साहित्यिक पुस्तक भण्डारका रुपमा धेरैले चिन्दछन् । भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १ बालकुमारी कलेज रोडमा रहेको यस पुस्तक पसलमा अन्य पाठ्यपुस्तक पनि पाइन्छ । पुस्तक पसलमा बिहानदेखि साँझ अबेरसम्म जिल्ला र बाहिरबाट आएका साहित्यकार जुट्ने गर्दछन् । पुस्तक पसलमा सापकोटाले आफैँले कमाएर रु ५० लाखभन्दा बढी लगानी गरिसक्नुभएको छ । यहाँको आम्दानी पुस्तक पसलमा थपिँदै गएको छ । सापकोटाले भन्नुभयो, “पुस्तक पसलमा अहिले हेर्दा रु एक करोडभन्दा बढीका पुस्तक छन् ।”
रु एक हजार २०० मासिक पारिश्रमिक लिएर काम शुरु गर्नुभएका सापकोटालाई श्रममा विश्वास गर्ने र सरल व्यक्तिका रुपमा धेरैले चिन्दछन् । फुर्सदको समयमा कायाकैरन दैनिक र त्यसको अनलाइन संस्करणमा समाचारसमेत लेख्नुहुने साहित्यिक व्यक्तित्व सापकोटा जिल्लामा पठन संस्कृतिको विकासमा आफू लागेको बताउनुहुन्छ । जिल्लाका लेखकको प्रकाशनको आधारसमेत बन्नुभएका सापकोटा भन्नुहुन्छ, “लेखन र पठन संस्कृतिको विकासले समाज रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।” के कति सकिन्छ आफू यसैमा लागिरहने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
मास्के पुस्तक पसलमा काम गर्दा त्यहाँ बिक्रीका लागि आएका पुस्तकको फोटो खिचेर फेसबुकमा राखेर लेखक र साहित्यकारमाझ पु¥याउने गर्नुभएका सापकोटाकोमा अहिले साहित्यकार आफैँ आउँछन् । पुस्तक व्यवसायबाटै एक भाइ र तीन बहिनीको बिहे मात्रै होइन, परिवार सञ्चालन गरेर व्यवसायसमेत बढाउन उहाँ सफल हुनुभएको छ । आख्यानकार वसन्त पराजुली भन्नुहुन्छ, “निरन्तरको मिहिनेत र मिजासिलो स्वभावकै कारण सापकोटा सफल हुनुभएको हो ।”
कामलाई सानो नभनी त्यसबाट अनुभव संगाल्दै निरन्तर लागिरहने हो भने सफलता मिल्छ भन्ने उदाहरण बन्नुभएको छ ३७ वर्षीय सापकोटा ।
चर्चित गायिका अन्जु पन्तको जन्मदिनमा पुर्व पति मनोज बडेमानको केक बोकेर पुगे अञ्जुको घर
आशा खड्कालाई प्रेमीले धोकादिएपछि परिन् अप्ठ्यारोमा
साँच्चिकै प्रेममा थिए पल र आँचल ?
भ्वाइस अफ नेपालका सुशिल नेपालकी हिरोइन भन्दा पनि राम्री यि सुन्दरी पत्नि